UMNDENI UNEMIBUZO ENGAPHENDULEKI NGOKUNYAMALALA KWENDODANA - Ilanga News
Home Izindaba UMNDENI UNEMIBUZO ENGAPHENDULEKI NGOKUNYAMALALA KWENDODANA
UMNDENI UNEMIBUZO ENGAPHENDULEKI NGOKUNYAMALALA KWENDODANA
UMNDENI womfundi kamatikuletsheni uMnu Scelo Gumede (20), osekuphele inyanga anyamalala ehambe kubo ethi umenywe kubo kamngane wakhe
NONHLAKANIPHO SHINGA UNEMIBUZO engaphenduleki umndeni womfundi kamatikuletsheni eNonhlevu High, KwaDukuza, onyamalale ngenyanga edlule ongakatholakali kuze kube yimanje. Unina walo mfundi, uNkz Nomzamo Hlatshwayo, uthi kabaqondi ukuthi kwenzakaleni endodaneni
yabo, njengoba ethi ukunyamalala kwayo sekuze kwabadalela izitha komakhelwane aphuma ekhaya eya kubona, njengoba uma bebuza kubona bengayitholi impendulo ebagculisayo. Uthi yize bengabaseMpangeni, indodana yakhe uMnu Scelo Gumede (20), ithuthele KwaDukuza, esigodini saseNonhlevu, ngemuva kokuthola isikole khona iyolungisa umatikuletsheni wayo.
“Uthole isikole KwaDukuza angakwazanga ukusithola eMpangeni. Ubehlala nogogo wakhe, nokuthe ngempelasonto wabe esevakasha emzini kadadewethu eGroutville. Uma besilandisa bathi ngezikhathi zabo-2 emini uthe usaya kamakhelwane, umenywe ngumngane wakhe ambize ngegama wathi ucele ukuba azomlekelela njengoba kubo kunetiye,” kusho yena. Uthi lokhu kakufani nendodana yakhe njengoba ingeyena umuntu okhonze imizi yabantu, futhi bamangale kakhulu uma sebezwa ukuthi kwalelo tiye kwakungelezinkukhu ezimbili.
Uqhuba athi udadewabo wazitshela ukuthi ubuyele eNonhlevu lapho ehlala khona ngaphandle kokusho, kodwa kuthe uma kuyophela usuku lwangoMsombuluko, kwayila kubonakala khona ukuthi kukhona okushaya amanzi. “Yilapho sibe sesithola khona ukuthi kakwaziwa ukuthi ushonephi, ubegcine ephume eya kwamakhelwane lapho athe kunetiye khona. Sibe nokuphoxeka okuyisimanga uma sesiya kamakhelwane siyobuza, ubaba wakhona wathi masingamfaki, masizibhekele indodana yami, singayifaki eyakhe ngoba akahlangene nokunyamalala kwayo,” kusho yena.
Uthi ngisho ukusebenza kwamaphoyisa kulolu daba kakubagculisi njengomndeni ngoba kakukho nokukodwa abake bakutshelwe ngumphenyi
waleli cala. “Sesiye amahlandla amaningi esiteshini samaphoyisa siyocela ukulekelelwa kodwa kubonakala sengathi kawanandaba. Kuze kwangenelela umphakathi waseGroutville ngokusizwa yikhansela, sabhikisha sihambe sibuza ngoba sesenzela ukuthi kube nomkhondo esiwutholayo, kodwa kuze kube yimanje kasitholi lutho. “Ungumfana osithanda kakhulu isikole nokuyikho okusenza sikhathazeke kakhulu ngaye. Siye nasesikoleni sakhe siyobuza kubangane bakhe ukuthi kakukho yini abakuzwile, kodwa sangasizakala,” kusho yena.
Lo mndeni uthi ususaba nokucela usizo ezinkundleni zokuxhumana ngemuva kokuba kukhona abalubonile udaba lwakhe lo mfana bafonela lo mndeni bathi bayamazi ukuthi ukuphi, mawukhiphe imali engango-R6 000 yikhona ezobuya. “Uma siya kubantu ababonayo ngokwesintu basitshela ukuthi kukhona lapho evaleleke khona nesivele siphele amandla singazi ukuthi kumele siphume sibheke ngakuphi. Isimo sesisibi kakhulu manje phakathi kukadadewethu nomakhelwane bakhe njengoba ingasabhekani nokubhekana,” kusho uNkz Hlatshwayo. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, Lt.Colonel Nqobile Gwala uqinisekisile ukuthi kuvulwe idokodo ngokunyamalala kukaMnu Gumede, kanti uthi kawukho umkhondo obusavelile. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
Previous article06 JUNE 2022
Next articleBavulelane amacala undunankulu noNgizwe